ဖူးနုသဈ: မွို့ပွ အငျဂငျြနီယာ တဈယောကျ နဲ့ စကားပွောခွငျး
Posted by ZT at 12:20 AM
အတွေ့အကြုံတွေပေါ့ ...း)
mechanical engineeringေးလးအကြောင်းလုပ်ပါဦး.
း) အဟိ..ငါတို့ကုန်ပနီက လခကိုအတော်လေးနောက်ကျပြီးမှ ပေးတာလဲ..မမေ့နိုင်စရာပါပဲလေ။ ကိုဖြိုးနဲ့ငါနဲ့ ဘ၀တူတွေပေါ့။
မယ်မွန်ကလည်း တောပြလား..အဲလေ. မြို့ပြလား....
I am Civil Engineer Degree Holder working here as QS .. I also want to leave from this working Environment ( Construction ) ..Trying ..:(..Look forward to your new post (..2)(..3) .Y
အော် မြို့ပြတွေ ဒီမှာ အလုပ်ပေါတယ်ဆိုပေမဲ့ အဲလို နေပူစပ်ခါးလုပ်ရတဲ့ အားနည်းချက်လေးတော့ ရှိတယ်နော်... တော်သေး ကျောင်းတုံးက ME ရတာ ကံဆိုးတယ်ထင်နေတာ။ Civil ရောက်ပြီး နေပူထဲလုပ်ရရင်လဲ မချောင်ဘူးရယ်။
စင်စင်....ကုန်ပနီက..မြို့ပြနဲ့ဆိုင်တာ လုပ်တာလေ..ငွေမလည်ရင်..၀န်ထမ်းတွေကို နောက်ကျမှပေးတာ သိပ်မုန်းတာပဲ။
ခြင်္သေ့မြေမှာ မသိသေးတာအများကြီး ရှိသေးပါလားဆိုပြီး မှတ်သားသွားပါတယ်း)
ကြာပီပေါ့ ကွယ်... တတ်နိုင်ပါဘူး... လုပ်နေရတာဘဲ... မြို့ ပြမှာ... ၅ ရက်အလုပ်ကတော့ ရွှေပါဘဲ...ရှားတယ်... ၅ရက်ခွဲ သို့ ၆ရက်လုပ်ရတာပါဘဲ... တခါလေတော့ ခြောက်ခွဲတောင်ပါသေး... အလုပ်တော့ ပေါပါ့ ...